अब को बन्दैछ राष्ट्रपति ? - Deshko News Deshko News अब को बन्दैछ राष्ट्रपति ? - Deshko News
अब को बन्दैछ राष्ट्रपति ?
काठमाडौं, कार्तिक ७
मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयन गर्न व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज शनिबार ३ बजे बस्दैछ । आजबसेको बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियालाई सुरु गर्ने भएको छ ।
संविधानको धारा २९७ को उपधारा २ बमोजिम दलहरूलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार पेस गर्न समय दिने व्यवस्था रहेको छ । आजैको बैठकले गठन गरेको निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका पेश गर्ने छ ।
बैठकबाट सभामुखले संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन गर्ने प्राबधान रहेको छ । प्रमुख तीनदल बीच भएको सहमति तोडिएसंगै दलहरुले साझा उम्मेदार बनाउन सक्ने सम्भावना निकै कम भएका कारण राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने सम्भावना बढी रहेको एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले बताएका छन् ।
सहमति हुन नसकेमा सांसद सदस्यहरूले गोप्य मतदानका आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले विजयी बन्नका लागि व्यवस्थापिकामा कायम रहेका ५ सय ९७ को सदस्य संख्याबाट २ सय ९९ मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।
एमाओवादी र एमालेबीचको सहमतिमा एमाओवादीलाई सभामुख दिए पछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनताका देखिएको समिकरण दोहोरियो भने एमालेले राष्ट्रपति लाने सम्भावना रहेको छ । तर एमालेले अहिलेसम्म आफ्नो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक हानथापका कारण एमाललेले नाम सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइन्छ । यस्तै कांग्रेसमा पनि अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
देउवा पक्षीय र कोइराला पक्षीयको हानथापका कारण कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न गाह्रो भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जनलाई पनि कोरोना
काठमाडौं, असोज ९ ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
अर्घाखाँचीमा भीषण पहिरो, १७ घर पुरिए
बुटवल, असोज ९ अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका भीषण पहिरो गएको छ । नगरपालिकाको वडा नं १२
ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, असोज ९ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमा
डा. केसीको अनसन : आयोगले दियो दुबै पक्षलाई यस्तो सुझाव
काठमाडौं, असोज ९ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. गोविन्द केसीका मागबारे सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह
सन्दिप आज पनि परेनन् प्लेइङ एघारमा
काठमाडौं, असाजे ९ इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत आज दिल्ली क्यापिटल र चेन्नई सुपरकिंग्सबीच खेल